Adobe XD: Dhizaini, Prototype, uye Goverana neAdobe's UX / UI Solution | Martech Zone
Nhasi, ndaisa Adobe XD, Adobe's UX / UI mhinduro yeprototyping mawebhusaiti, webhu kunyorera, uye nharembozha. Adobe XD inogonesa vashandisi kuchinjira kubva kumatambo emafaira emagetsi kuenda kumatanho ekubatanidza mune kamwe chete. Iwe unogona kuita shanduko kune yako dhizaini uye uone yako prototype inogadziridza otomatiki - hapana syncing inodiwa. Uye iwe unogona kuongorora ako prototypes, akazara neshanduko pane iOS uye Android zvishandiso, wozogovana navo nechikwata chako kuti uwane mhinduro nekukurumidza.
Zvimiro zveAdobe XD Sanganisira:
Inopindirana prototypes - Chinja kubva dhizaini kuenda prototype modhi nekudzvanya kamwe chete, uye batanidza artboards kuti utaure kuyerera uye nzira dze multiscreen maapp. Unganidza dhizaini yezvinhu kubva kune imwe bhodhi kuenda kune imwe, kusanganisira Dzokorora Grid masero. Wedzera kudyidzana neyakajeka ekuona ekudzora kuti uedze uye usimbise chiitiko.
Shambadzira prototypes yemhinduro - Gadzira inogoverwa yewebhu zvinongedzo kuti uwane mhinduro pane ako dhizaini, kana uasimbise paBehance kana peji rewebhu. Vaongorori vanogona kupindura zvakananga pane ako prototypes uye chaiwo zvikamu zveyako dhizaini. Iwe uchazoziviswa kana vataura, uye ivo vanogona kungozorodza mabhurawuza avo kuti vaone shanduko dzako.
Kurumidza, akasiyana-siyana mabhodhi - Kunyangwe iwe urikushanda neayo imwe bhodhi kana zana, XD inokupa iwe kumwe chete kutsanya kuita. Dhizaini yezvakasiyana skrini uye zvishandiso. Pan uye zoom pasina lag nguva. Sarudza kubva paseti dzakasetwa kana kutsanangura yako, uye kuteedzera pakati pemabhodhi emabhodhi pasina kurasikirwa nekuiswa kwezvinhu zvako zvekugadzira.
Dzokorora Grid - Sarudza zvinhu mune yako dhizaini, senge yekudyidzana runyorwa kana pikicha gallery, uye wobva wadzokorora iwo akatwasuka kana akatwasuka kakawanda sezvaunoda - ese masitayera ako uye nzvimbo dzakamira gara wakamira. Gadziridza chinhu kamwe chete uye shanduko dzako dzinozogadziridza kwese kwese
Muchinjikwa-chikuva rutsigiro - Adobe XD natively inotsigira Windows 10 (Universal Windows Platform) uye Mac, ine shamwari nharembozha maapplication eApple neIOS.
Panzvimbo yezvinhu - Gadzira mavara uye zvitaera zvemhando zviripo zvirinani kuti zvishandiswazve nekuzviwedzera kune iwo Maseru mapaneru (yaimbova iyo Zviratidzo pani), iyo inosanganisa zviripo Rongedza chero ruvara kana hunhu maitiro mupaneru uye shanduko dzinozoonekwa mune rako rese gwaro.
Zviratidzo zvekufungidzira - Sevha nguva nezviratidzo, zvinogadziriswazve dhizaini izvo zvinobvisa kudiwa kwekutsvaga nekugadzirisa yega yega muenzaniso weaseti pane gwaro. Gadziridza imwe uye ivo vanozo gadziridza kwese kwese, kana kusarudza kuwedzera zviitiko zvakati. Zviratidzo zvinogona kuve vector mifananidzo, mifananidzo ye raster, kana zvinyorwa zvemavara, uye zvinogona zvakare kushandiswa sezvinhu mukati meKudzokorora Grid.
Rokusika Cloud Raibhurari - Uine Kubwinya Kwemakore Raibhurari kusangana, iwe unogona kuwana uye kushandisa raster mifananidzo, mavara uye hunhu masitayera akagadzirwa muPhotohop CC, Illustrator CC, uye mamwe maCloud Creative mafomu kubva mukati meXD, uye woashandisazve chero kupi mumagwaro ako.
Contextual Pfuma Yekuongorora - Shanda munzvimbo isina kugadzikana nekutenda kune mamiriro-anoziva Property Inspector, iyo inongoratidzira sarudzo dzezvinhu zvawasarudza. Chinja zvivakwa senge muganho ruvara uye ukobvu, zadza mavara, mimvuri, blurs, opacity, uye kutenderera, uye nzira dzekuwana dzekuenderana, zviyero, uye Dzokorora Grid.
Smart canvas kufamba - Nyatso zoom pane imwe nharaunda yenzvimbo yako dhizaini, kana sarudza pane artboard uye shandisa nzira pfupi kuti uswededze kurudyi kwariri. Pan kana zoom ne mouse yako, touchpad, kana mapfupi ekhibhodi. Uye tora kuita kukuru kunyangwe uine mazana emabhodhi.
Zvinyorwa zvinoenderana - Ramba wakarongeka uye wakanangisa uchitarisa akaomesesa dhizaini nekuda kwenzira yemamiriro kumatete. XD inosimudza chete maratidziro ane hukama neartboard iyo yauri kushanda pairi, kuti ugone kukurumidza uye nyore kuwana zvaunoda.
Marongero ekushandisa maturusi - Seamless dhirowa, shandisa zvekare, uye remix dhizaini yezvinhu uchishandisa snap-kune grids uye mamwe enjiuit masisitimu ekugadzirisa ayo anobatsira iwe kugadzira zviyero zvine hukama pakati pezvinhu, masiki ane maumbirwo, boka, kukiya, kuenderana, uye nekuparadzira dhizaini yezvinhu, nezvimwe.
Blur mhedzisiro - Kurumidza kusanganisa chinhu chakasarudzika kana kumashure kwese kuti uchinje poindi yedhizaini yako, ichipa kudzika uye kukura.
Mhando dzakasiyana dzemitsara gradients - Gadzira akanaka akakwenenzverwa gradients uchishandisa zvakapusa asi zvakaringana zvekutarisa zvekutonga muColor Picker. Iwe unogona zvakare kuendesa gradients kubva ku Photoshop CC uye Illustrator CC.
Yemazuva ano Pen chishandiso - Dhirowa maumbirwo uye nzira zviri nyore nechishandiso chePen. Shandisa tsika tsika, wedzera kana kubvisa anchor points, nyore kushandisa mitsara, uye chinja pakati yakakombama uye angled nzira - zvese zvine imwecheteyo chishandiso.
Boolean boka kuronga - Gadzira uye edza nemaumbirwo akaomarara nekubatanidza mapoka ezvinhu uchishandisa vasingakuvadze maBoolean vanoshanda.
Typography Kugadzira - Chimiro chemavara chine chaiyo kutonga kudzora ruzivo rwevashandisi Nyore gadzirisa typographical zvinhu senge font, typeface, saizi, kuenderana, hunhu nzvimbo, uye mutsetse nzvimbo. Chinja kutaridzika kwemavara ako nenzira imwecheteyo yaunoshandura zvimwe zvinhu muXD senge opacity, zadza, kumashure uye blur mhedzisiro, uye miganhu.
Yakagadziriswa color control - Sarudza mavara nekupinda chaiwo maitiro kana nesampling kubva mukati kana kunze kweXD neEyedropper. Gadzira uye chengetedza machira emavara, uye shandisa mapfupi ehexadecimal kodhi muColor Picker.
UI zviwanikwa - Kurumidza dhizaini uye prototype yeApple iOS, Google Material Dhizaini, uye Microsoft Windows zvishandiso zvinoshandisa zvemhando yepamusoro mushandisi interface zvikamu.
Kopa uye unama kubva kune mamwe madhizaini ekugadzira - Uya nemifananidzo muXD kubva ku Photoshop CC uye Illustrator CC.
In-mamiriro iOS uye Android preview - Wotarisa ako magadzirirwo nekubatana kwese pane izvo chaizvo zvishandiso zvauri kunongedza. Ita shanduko pakombuta uye wozovaedza pamidziyo yako kutendeseka uye kushandisika.
Hotspot hinting - Ratidza otomatiki hotspots mune yako prototype kuti vashandisi vaone kuti ndedzipi nzvimbo dzinopindirana uye dzinodzvanya.
Prototype manejimendi - Gadzira akawanda ma URL kubva kune imwecheteyo faira kuti ugovane akasiyana vhezheni yako prototype. Goverana pasingagumi nhamba yezviratidziro, uye nyore kuwana uye kudzima ivo kubva kuCloud Cloud account.
Rekota prototype kudyidzana semavhidhiyo - Sezvo iwe uchidzvanya kuburikidza nekutarisa kwako, nyora faira reMP4 kuti ugovane nechikwata chako kana vanobatika (Mac chete).
Export mifananidzo, zvinhu, uye artboard - Export mifananidzo uye dhizaini muPNG uye SVG mafomati, ayo aunogona kumisikidza eIOS, Android, webhu, kana yako wega tsika magadziriso. Tumira kunze kwese artboard kana zvimwe zvinhu. Uye govera zvinhu uye mabhodhi emabhodhi nekuzvitumira kunze semafaira ega ePDF kana seimwe faira rePDF.
Kutsigira mitauro yakawanda - Mitauro yakatsigirwa inosanganisira Chirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiJapane, uye chiKorea.
Email ziviso zvemashoko - Tora maemail ziviso kana vanobatana vachitaura pane ako webhu prototypes. Emails anogona kutumirwa ega kana akabatanidzwa mukugaya kwemazuva ese
Kupfuura zvese, Adobe XD inouya nerezinesi rangu reAdobe Creative Suite!
Kuzivisa: Isu tiri vanobatana neAdobe.
Tags: kupiswaadobe yekugadzira suiteadobe xdPrototypingui dhizainiuser experienceuser interface
7 Ecommerce Matipi Ekugadzira Zvemukati zvinoshandura